Isiphelo Sendlela Yokufuduka Ngokuzenzekelayo
Isiphelo Sendlela Yokufuduka Ngokuzenzekelayo I-MBAS 2 yenzelwe ukungahambelani nemveliso yokhuseleko kunye nokunciphisa uloyiko kunye noloyiko zombini ezobuchwepheshe kunye nezengqondo. Uyilo lwayo luphinda lucacisa izinto eziqhelekileyo zekhompyuter zasekhaya ukubonelela ngenkangeleko yomsebenzisi kubemi basezilalini kumda weThailand. Ilizwi kunye nezibonisi kwisikhokelo kwisikrini sokuqala abasebenzisi beenyathelo ngenyathelo ngenqubo. Ithoni yombala ombaxa kumnwe wokuprintwa komnwe ibonisa ngokucacileyo iindawo zokuskena. I-MBAS 2 yimveliso eyahlukileyo ejolise ekutshintsheni indlela enqamleza imida, sivumele iilwimi ezininzi kunye namava omsebenzisi angakhethiyo.
Isitulo Ndiyazihlonipha zonke iintlobo zezitulo. Ngokoluvo lwam enye yezona zinto zibalulekileyo kunye neeklasikhi kunye nezinto ezikhethekileyo kuyilo lwangaphakathi sisihlalo. Umbono wesihlalo se-Serenad uvela kwi-swan emanzini ajika wabeka ubuso bakhe phakathi kwamaphiko. Mhlawumbi indawo ebengezelayo nekhanyayo kwisitulo saseSerenad ngokwahlukeneyo kunye noyilo olukhethekileyo lwenziwe kuphela kwiindawo ezikhethekileyo nezingqayizivele.
Isitulo Esinengca Ukubetha okugqwesileyo, ukucaciseka okulula ngombono, ukhululekile, kuyilelwe ngokuzinzileyo engqondweni. Usihlalo weMonroe ngumzamo wokwenza lula inkqubo yokuzibandakanya ebonakalayo ekwenzeni isitulo esinamavili. Ixhaphaza ubuchwepheshe be-CNC ukusika into ephindaphindiweyo kwi-MDF, ezi zinto zidla ngokudityaniswa nge-axis esembindini ukuze zenze isitulo esinamavili esigoqileyo. Umlenze wangasemva kancinci kancinci u-morphs kwi-backrest kunye nengalo yomlenze wangaphambili, udala ubuhle obuqaqambileyo ngokupheleleyo buchazwe ngokulula kwenkqubo yokuvelisa.
Ibhentshi Yepaki Le projekthi isekwe kwimbono yeKhonkco "Drop & Forget", Oko kukuthi, kulula ekufakweni kwesiza ngeendleko zokufaka ezimbalwa ngokubhekisele kulwakhiwo olukhoyo lwedolophu. Iifom zekonkrithi eqinileyo zelarbon, ezinokulungelelana ngononophelo, zenza amava okuva kunye nokuhlala kamnandi.
I-Hi-Fi Turntable Eyona njongo iphambili yetafile yokujika ye-Hi-Fi kukuphinda wenze ezona nyulu kunye nezingavakaliyo zezandi; Owona mxholo wesandi zombini ziitheminali kunye nomxholo wokuyilwa. Le mveliso intle yenziwe ngobuqhetseba kwisandi esivelisa isandi kwakhona. Njengomatshini otyhidiweyo uphakathi kweyona misebenzi iphambili yokwenza i-Hi-Fi i-turntable ekhoyo kwaye le ntsebenzo elingalinganiyo iyaboniswa kwaye yandiswe ngohlobo lwayo eyahlukileyo kunye neempawu zoyilo; ukujoyina ifomu kunye nokusebenza kwimanyano yokomoya ukwenza i-calliope turntable.
Sokuhlambela Injongo yoyilo lwevortex kukufumana indlela entsha yokuphembelela ukuhamba kwamanzi kwiindawo zokuhlambela ukonyusa ukusebenza kwabo, banegalelo kumava abo abasebenzisi kwaye baphucule iimpawu zabo zobuhle kunye nobuhle. Isiphumo sisifaniso, esivela kwifomu efanelekileyo ye-vortex echaza umjelo kunye nokuhamba kwamanzi okubonakalisa yonke into njengesixhobo sokuhlamba esisebenzayo. Le fomu idityaniswe nempompo, ikhokelela amanzi ekungeneni kwindlela evulekile evumela inani elilinganayo lamanzi lokugubungela umhlaba ongaphezulu ophumela ekucutheni kokusetyenziswa kwamanzi kokucoca.
Bionyalux Iphakeji Yokhathalelo Lolusu Thursday 2 December
Firo Iseti Yokupheka Umlilo Wednesday 1 December
Phenotype 002 Isongo Tuesday 30 November
Isiphelo Sendlela Yokufuduka Ngokuzenzekelayo Isitulo Isitulo Esinengca Ibhentshi Yepaki I-Hi-Fi Turntable Sokuhlambela